I-Idyllic country farmhouse, inja/i-equestrian friendly - I-Airbnb
I-Idyllic country farmhouse, inja/i-equestrian friendly
Kircubbin, Northern Ireland, i-United Kingdom
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Rachael
U-Rachael Ungumbungazi ovelele
Indlu yasepulazini enhle endala endaweni enokuthula. Ulala ngokunethezeka 7, kanye nosana.
Igumbi lokuhlala elikhulu elinomshini wokushisa izinkuni kanye negumbi lelanga elinombono phezu kwengadi.
Indawo yokudlela yasekhishini enkulu kanye nekhishi elisetshenziswayo elihlukile kanye negumbi lokugezela elingaphansi.
Ihhovisi/Igumbi lokulala lesine elenziwe ngombhede owodwa.
Isitezi esiphezulu samakamelo okulala ayi-3 ane-master en suite.
Eduze nenani lamabhishi. Indawo enhle yasemaphandleni ihamba emnyango wakho.
Le ndlu enhle yasepulazini iyikhaya likamama, phambilini okwakungekagogo nomkhulu. Usanda kuthatha isinqumo sokuba ngumsakazi we-air bnb. Indlu ihlome ngokuphelele futhi izindawo zizovulwa izivakashi, nokho izinto zikamama zizoba khona.
Sitholakala e-Rubane, sikumakhilomitha ambalwa ukusuka e-Kircubbin (idolobhana lendawo elinezitolo, izindawo zokudlela kanye nezindawo zobumnandi). Ibanga elifanayo uma ubheka ngakolunye uhlangothi uzofinyelela e-Portavogie, isigodi sokudoba esinemikhiqizo eminingi emisha nezindawo zokudlela ukuze ujabulele ukubanjwa.
I-Cloughey beach eyawina umklomelo iqhele ngamamayela angu-3 futhi iyikhaya leKirkistown Castle Golf Club - 18 hole links course.
IPortaferry, ikhaya le-Aquarium yaseNyakatho Ireland kuphela iqhele ngamamayela ayi-7 kuphela nosuku oluhle lokuphuma.
I-Echlinville Distillery ezuze imiklomelo eminingi ingaphansi kwemayela. Ungavakashela ukuvakasha futhi uthenge ama-gin nama-whiskeys endawo asethengiswa emhlabeni jikelele.
Kunoma yibaphi abalandeli bezimoto, sikude nje amamayela ambalwa ukusuka ethrekhi yomjaho eshesha kakhulu yase-Ireland, iKirkistown Motor Racing Circuit evame ukuba nezimoto, ibhayisikili & kart racing.
Kunezimakethe eziningi zabalimi eduze lapho umama wethu aphinde athengise khona umkhiqizo (ozothola kuzo ephaketheni lakho lokwamukela!) Imininingwane egcwele izonikezwa mayelana nokutholakala endaweni encwadini yezivakashi.
Indawo enhle iphinde yavela kakhulu emdlalweni omusha we-BBC othi Bloodlines namafilimu amaningi
Itholakalela noma yiziphi izinkinga ongase ube nazo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Kircubbin namaphethelo